Ahoana ny fiasan'i Pegasus sy ny fomba ahafantarana raha voan'ny aretina ianao | iPhone News
Ny fomba fiasan'i Pegasus sy ny fomba ahafantarana raha voan'ny aretina ianao
louis padilla | 03/05/2022 12:57 | About us, maro
Pegasus no teny filamatra. Ny fitaovana hack ho an'ny Ny fidirana amin'ny angon-drakitra rehetra amin'ny finday iPhone na Android dia vaovao amin'ny haino aman-jery rehetra. Ahoana no fiasan'izy io? Ahoana no ahafantarako raha voan'ny aretina aho? Lazainay aminao ny zava-drehetra eto ambany.
1 Inona no atao hoe Pegasus?
2 Ahoana ny fametrahana Pegasus amin'ny findaiko?
3 Iza no afaka mampiasa Pegasus?
4 Ahoana no ahafantarako raha voan'ny aretina aho?
5 Ahoana no ahafahako tsy ho voan'ny Pegasus?
Inona no atao hoe Pegasus?
Pegasus dia fitaovana hitsikilo ny findainao. Azontsika sokajiana ho «virus» izy io mba hifankahazoantsika rehetra, izay tsy manimba ny findainao, tsy mahatonga na inona na inona ho voafafa na tsy mety, fa kosa manana fidirana amin'ny angon-drakitrao rehetra ary mandefa izany amin'izay nametraka an'io virus io tamin'ny findainao. Ity fitaovana ity dia noforonin'ny NSO Group, orinasa israeliana mivarotra ity fitaovana ity mba hitsikilovana olona. Eny, tsotra izany, orinasa efa fanta-daza, fantatry ny rehetra ny ataony ary ekena izany na dia eo aza ny savorovoro rehetra nanodidina azy hatramin'ny nahafantarana ny fisiany. Apple dia efa nametraka fitarainana momba ity orinasa ity.
Ahoana ny fametrahana Pegasus amin'ny findaiko?
Miresaka momba ny iPhones voan'ny Pegasus foana ny olona, ​​​​fa ny zava-misy dia ity fitaovana ity miasa ho an'ny iPhone sy Android. Matetika ireo mpanao politika ambony, mpanao gazety, mpikatroka, mpanohitra... ireo olona “liana” amin’ny fitsikilovana mba hifehy ny fihetsiny sy hahalala ny zavatra hainy rehetra no lasibatr’ity fitaovana ity, ary ireny olona ireny, noho ny fiarovana, dia matetika mampiasa iPhone, azo antoka kokoa noho ny Android, fa na dia azo antoka aza, dia tsy azo resena.
Mba hametrahana Pegasus amin'ny iPhone-nao dia tsy mila manao na inona na inona akory ianao. Ny orinasa NSO dia nanamboatra fitaovana efa mandroso ka afaka miditra amin'ny findainao nefa tsy manindry rohy na misintona rindranasa. Ny antso WhatsApp tsotra na hafatra alefa amin'ny findainao, raha tsy sokafanao, dia afaka manome fidirana amin'ity spyware ity. Mba hanaovana izany, araraoty ilay antsoina hoe “faharefoana aotra andro”, lesoka fiarovana izay tsy fantatry ny mpanamboatra finday ary noho izany dia tsy azo amboarina, satria tsy fantany akory fa misy izy ireo. Rehefa tafapetraka, ny zava-drehetra, averiko indray, ny zavatra rehetra ao amin'ny iPhone-nao dia eo am-pelatanan'izay mampiasa io fitaovana io.
Apple dia efa namoaka fanavaozam-baovao volana lasa izay izay nanamboatra ny sasany amin'ireo lesoka fiarovana ireo, saingy i Pegasus dia mahita ny hafa ary manararaotra azy ireo. ankehitriny tsy fantatray izay bibikely ampiasainy, na izay telefaona na dikan-teny OS izay mora iharan'ny fitaovan'ny mpitsikilo azy. Fantatsika fa Apple dia manamboatra azy ireo raha vao mahita azy ireo, saingy fantatsika koa fa hisy foana ny bibikely izay ho hita sy hararaotina. Izany no lalao mandrakizay ny saka sy ny totozy.
Iza no afaka mampiasa Pegasus?
Nambaran’ny vondrona NSO fa ny fitaovany ihany no ampiasain’ny sampan-draharaham-panjakana, toy ny fampiononana. Saingy araka ny nolazain'i Tim Cook rehefa niresaka momba ny fanerena ireo orinasa hamorona "varavarana aoriana" izay manome fidirana amin'ny telefaona rehefa ilaina izany, "ny varavarana aoriana ho an'ny tsara fanahy dia varavarana aoriana ho an'ny olon-dratsy." ». Ny hany fampiononana ananantsika olom-pirenena tsotra dia ny hoe tsy azon'iza na iza idiran'i Pegasus noho ny antony ara-toekarena fotsiny. Ny fampiasana ity fitaovana ity ho an'ny olona iray dia misy vidiny eo amin'ny 96.000 euros, noho izany dia heveriko fa tsy hampiasain'ny mpiara-miasa aminao na ny zaodahinao izany hitsikilo ny findainao.
Mampanahy ny rehetra anefa ny mahafantatra fa misy izany fitaovana afaka mitsikilo antsika 24 ora isan'andro, 365 andro amin'ny taona amin'ny fampiasana smartphone, mahafantatra ny zavatra rehetra ataontsika, hitantsika, mamaky, mihaino ary manoratra. Iza no afaka miantoka fa tsy ho latsaka eo am-pelatanan'ny hafa mivarotra azy mora kokoa i Pegasus? Sa atao maimaim-poana ho an'ny rehetra mihitsy aza? Ary ny zavatra nolazaiko taminao tany am-piandohan'ny lahatsoratra, ny zavatra mampanahy indrindra dia ny fahafantarana fa ny orinasa noforonin'i Pegasus dia afaka mihetsika tsy misy sazy miaraka amin'ny fitaovana mandika ny lalàna rehetra azo atao.
Ahoana no ahafantarako raha voan'ny aretina aho?
Raha te-hahafantatra ianao raha misy olona nametraka Pegasus tamin'ny findainao dia misy fitaovana hamantarana azy ary maimaim-poana izy ireo. Amin'ny lafiny iray dia manana ny rindrambaiko open source novolavolain'ny Amnesty International izahay ary azonao alaina avy amin'ny GitHub (rohy). Tsy logiciel azon'ny rehetra ampiasaina anefa izy io noho ny fahasarotany, ka misy fomba hafa tsotra sy azo idirana kokoa ho an'ireo izay tsy manana fahaiza-manao informatika mandroso. Ohatra ny fitaovana iMazing (rohy), maimaim-poana ny télécharger, dia ahafahanao mahafantatra ihany koa raha voan'ny Pegasus ianao. Mifanaraka amin'ny Windows sy macOS izy io ary na dia voaloa aza ny sasany amin'ireo endri-javatra misy azy dia maimaim-poana ny fitiliana Pegasus.
Ahoana no ahafahako tsy ho voan'ny Pegasus?
Raha ny zava-misy, raha misy olona te-hametraka Pegasus amin'ny findainao, dia tsy misy fomba manodidina azy tanteraka. Saingy azonao atao ny mitandrina mba hampihenana ny risika amin'ny faran'izay kely indrindra. Fantatray fa nisy bibikely namela an'i Pegasus hametraka tsy misy mpampiasa manao na inona na inona, fa fantatray ihany koa fa Apple dia mamoaka paty tsy an-kijanona hamahana ireo bibikely ireo, noho izany Ny zavatra tsara indrindra dia ny mitazona ny iPhone anao hatrany amin'ny kinova farany misy. Zava-dehibe ihany koa ny tsy hikitika rohy izay tsy fantatrao ny fiaviany, na manokatra hafatra avy amin'ny mpandefa tsy fantatra na mampiahiahy.
Momba ny fametrahana fampiharana, amin'ny iOS dia tsy afaka mametraka fampiharana avy any ivelan'ny App Store ianao. Izany dia zavatra izay dinihina amin'izao fotoana izao amin'ny fikambanana maro toy ny Vaomiera Eoropeana, saingy fepetra fiarovana miaro antsika amin'ny fanafihana ivelany. Raha toa ka voatery manokatra ny rafitra misy azy i Apple ary mamela ny "sideloading" na ny fametrahana fampiharana avy any ivelan'ny fivarotany, dia hitombo be ny risika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ny fomba fiasan'i Pegasus sy ny fomba ahafantarana raha voan'ny aretina ianao
Podcast 13x30: Pegasus, otrikaretina hafa mandrahona areti-mifindra